Tea – Healthy Life Journal
သံဓာတ်စုပ်ယူမှု ဟန့်တားပေးသည့် အစားအသောက်များ
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးအားနည်းတဲ့အခါ သံဓာတ်စုပ်ယူမှု ဟန့် တားပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို သတိထားသင့်တယ်လို့ရေးတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေက သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ဟန့်တားနိုင်ပါသလဲရှင့်။ A. ဟုတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ဟန့်တားပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို...
ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ဆံပင်သန့်စင်ရအောင် . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ ရေနွေးကြမ်းအေးသွားလို့ ပိုနေရင် သွန်မပစ်ပါနဲ့။ ဆံပင်သားအတွက် အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ – မည်းနက်နေသော ဆံပင် မည်းနက်နေတဲ့ရေနွေးကြမ်းကို ဆံပင်ပေါ်လောင်းချကာ ဆေးကြောလိုက်ပါ၊ ဆံပင်သားကို ပိုပြီး မည်းနက်စေပါတယ်။ – ဆေးဆိုးထားသော ဆံပင် ရေနွေးကြမ်းထဲ လိမ္မော်ခွံ...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်အိမ်ထဲမှာပဲ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပါ။ နိုင်ငံအများစုဟာ ရေနွေးကြမ်းကို ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံ တစ်ခုလို သောက်သုံးကြပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းဟာ အေးမြတဲ့ ညတွေမှာ သင့်ကို နွေးထွေးစေတဲ့အပြင် တခြားအကျိုးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ (၁) မျက်စိညောင်းညာခြင်း လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကိုယူပြီး...
ရေနွေးကြမ်းရဲ့ အစွမ်း . . .
မေး။ ။ အသက်ကြီးတော့ ရေနွေးကြမ်းပဲ သောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းရဲ့ အာနိသင်လေး သိချင်လို့ပါ။ ဦးပေါက်၊ ဒေးဒရဲ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ရေနွေးကြမ်းသောက်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ဖက်စိမ်းလက် ဖက်ရည်...
လက်ဖက်စားရင်၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ရင် ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ ရနိုင်သလဲ . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လက်ဖက်စိမ်း၊ လက်ဖက်မည်း၊ အူလွန်၊ အဖြူ ရောင်လက်ဖက်စတာတွေက အရသာမတူညီကြသလို ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်တွေလည်း အသီးသီးရှိကြပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်တွေကို ရေနွေးပူပူထဲ စိမ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းအဖြစ် သောက်သုံးလေ့ရှိသလို လက်ဖက်ရွက်ကိုပဲနှပ်ပြီး စားလေ့လည်း ရှိကြပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ လက်ဖက်ရွက်ဖြစ်ဖို့တော့...
လက်ဖက်ရည်ထဲစိမ်သောက်ထားတဲ့ လက်ဖက်အိတ် (Tea Bag) ကို လွှင့်မပစ်ဘဲအခြောက်ခံကာ အနံ့ထွက်နေတဲ့ရှူးဖိနပ် ဒါမှမဟုတ် အားကစားခန်းမယူတဲ့ အိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာအနံ့ဆိုးတွေကို စုပ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ဘူးထဲ ရေနွေးထည့်သောက်ရင် . . .
မေး. ကျိုချက်ထားတဲ့ ရေနွေးပူကို ဖန်သားပါဓာတ်ဘူးထဲမှာလှောင်ထားပြီး သောက်သုံးတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘဲ ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးလို့ပါ။ အဲဒါဟုတ်ပါသလား။ ဟုတ်ရင် ဘယ်လိုရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. လက်ရှိသိပ္ပံနည်းအရ ရေနွေးကျိုသောက်တာဟာ ရေစိမ်းသောက်တာထက် ပိုကောင်းတယ်လို့...
၊ လရိပ်မေ ၊ ပရိုတင်းနဲ့ အဆီများများပါတဲ့အစာ စားပြီးချိန်မှာ လေပွတာနဲ့ အစာမကြေတာတို့လိုဝေဒနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီဝေဒနာတွေ သက်သာစေဖို့ ချင်းသံပရိုသီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ – သံပရိုသီးတစ်ခြမ်း၊ – ရေ တစ်လီတာ၊ – ချင်း...